8 Hevitra momba ny dia fitsangatsanganana tsara indrindra | Save A Train
Home > Travel Etazonia > 8 Hevitra momba ny dia fitsangatsanganana tsara indrindra
Amin'ity taona ity dia manana fotoana hijerena ireo zava-mahatalanjona eo amin'izao tontolo izao ianao satria manatsara hatrany ny fitsipiky ny fizahan-tany. Ny toerana fialan-tsasatra izay nikatona teo aloha dia misokatra miadana satria izao tontolo izao dia manitsy ny fiainana miaraka amin'ny areti-mandringana. Ireto ny 8 Hevitra fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra 2021 izay tokony hoheverinao.
Ny dia an-dalamby no endrika fivezivezena indrindra amin'ny tontolo iainana. Ity lahatsoratra ity dia nosoratana mba hampianatra momba Train Travel ary Izy no nanaovana Save A Train, Train mora indrindra Tickets Website In The World.
Ity faritra ity dia any atsinanan'i Massachusetts ary iray amin'ireo faritra notetezinina be indrindra tao amin'ny morontsiraka atsinanana. In 2021, mbola eo an-tampon'ny tabilao io ho iray amin'ireo toerana fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana. Betsaka ny zavatra ho hitanao amin'ity faritra ity ao anatin'izany tsara tarehy tora-pasika, parks, tranon-jiro manan-tantara, ary fialamboly voajanahary betsaka. Raha mitsidika ity tanàna ity ianao, zava-dehibe ny itadiavanao toerana azo antoka. Ny hofan-trano fialan-tsasatra no misafidy tsara indrindra raha ny momba an'io. Aleo mijanona ao amin'ny efitrano fandraisam-bahiny ety, azonao atao ny misafidy ny hijanona ao amin'ny iray amin'ireo Cape Cod manankarena hofan-trano fialan-tsasatra. Izany dia hanome anao fahatsapana toy ny ao an-trano satria hanana fidirana amin'ny kojakoja toa ny lakozia sy ny trano fanasan-damba ary ny fitaovana toy izany ianao Fitaovana HVAC. Io dia mora ampiasaina indrindra rehefa niara-family satria hanana fotoana hanaovana sakafo matsiro sy manadio ianao mandritra ny fotoana ijanonanao. Ankoatry ny, misy ambaratonga tsiambaratelo amin'ny fanofana fialan-tsasatra raha ampitahaina amin'ny hotely.
2. Hevitra fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra 2021: Alaska
Na eo aza ny fisarahana ara-jeografika an'i Etazonia, Alaska dia iray amin'ireo toerana mahavariana sy kanto hitsidika azy. Toerana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tonga lafatra ho an'ny fialantsasatra ski miaraka amin'ny ankizy. Rehefa mankany amin'ity faritra ity ianao, hahita glasier lavitra ianao, tendrombohitra misavoana, moose be voninahitra, 12bera ft-avo, ary morontsiraka lao maro. Anisan'ireo toerana ambony azonao tsidihina any Alaska ny valan-javaboary Denali, aiza no ahitanao bera, amboadia, ary moose. Hahafahanao mandeha amoron'ny renirano Savage ihany koa ianao rehefa mankafy ny rano milamina. Raha tia manjono ianao, afaka mahazo fotoana hitsidihana ny toeram-panjonoana any Alaska ianao, homera. Fanampin'izany, afaka nandao ny efitra ianao ary nankany Anchorage izay tanàna lehibe indrindra any Alaska. Rehefa mitsidika an'i Alaska miaraka amin'ny ankohonanao ianao, tokony ho azonao antoka fa mitsidika ny Arctic Circle Day Tour ianao avy amin'ny Fairbanks sy ny Matanuska Glacier Full day Tour. Ireo fitsidihana roa ireo dia hamita ny fialan-tsasatra any Alaska.
3. Ny Grand Canyon any Arizona
Na eo aza ny mahazo mpitsidika eo amin'ny dimy tapitrisa isan-taona, Ny Grand Canyon dia mbola eo amin'ny toerana tsara indrindra hitsidihana 2021. Izany no tsangambato malaza indrindra any Etazonia ary miseho ho tsara tarehy isaky ny zoro. Azonao atao ny mandeha mitsangatsangana amin'ity faritra ity na mandeha mitaingina angidimby mba hankafizanao ny tontolon'ny fahitana avy eny amin'ny habakabaka. Azonao atao ny miditra amin'ny sisiny avaratra sy atsimo amin'ny lafiny mifanohitra amin'ilay lohasaha. Ny ankamaroan'ny olona dia aleony mitsidika ny Grand Canyon National Park's South Rim satria misokatra foana na dia rehefa ririnina aza. Afaka mandray fiara ianao na mitokana na mampiasa ireo bisy fitsangantsanganana fizahan-tany amin'ity faritra ity hankafizanao ny mason'ny tany efitra. Any amin'ny Grand Canyon, afaka mahita bebe kokoa noho ny 447 karazana vorona izay misy, mitoby mandritra ny alina any an'efitra, ary mandray anjara amin'ny hetsika mahafinaritra toy ny rafting. Ao amin'ity faritra ity, tsy misy farany ny fotoana mahafinaritra!
4. Idea fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra 2021: Valan-javaboary Crater Lake
Any Oregon, Telo amby dimam-polo kilometatra toradroa ny velaran'i Crater Lake. Ny farihy dia mipetraka ao anatin'ny tendrombohitra Mazama izay niforona 7000 taona lasa izay tamin'ny fipoahana. Izy io dia manana rano manga izay manome taratra mahatalanjona izay hahatonga anao ho talanjona. Ny hatsaran'ity farihy ity dia izay afaka mandeha antsitrika scuba ianao mandritra ny 2000ft eo ho eo raha maniry izany karazana fahafinaretana izany ianao. Hahafinaritra ny dianao mankany amin'ity faritra ity, mila mandany telo andro hijerena ny zava-mahatalanjona rehetra atolotry ny farihy ianao.
5. World Disney
Ny farany amin'ny lisitra dia Disney vala zaridaina ary trano fandraisam-bahiny any Orlando. Ity toerana manintona ity dia mahatonga ny toerana fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra ho an'ireo olona very maina tanteraka amin'ny asany isan'andro. Tena marina izany ho an'ireo mpitsabo mpanampy voamarina izay vao nahavita ny NCLEX RN fanadinana ary mila fialan-tsasatra mahafinaritra. Tsara vintana ho azy ireo, hatramin'ny nanombohan'ny taona, ny ankamaroan'ny valan-javaboary dia nisokatra indray ary vonona hanao raharaham-barotra. Raha jerena ny lazany, feno olona ity toerana ity matetika ka tsy maintsy kasainao hatao ny mandamina ny fitsidihanao. Hahafinaritra anao ny fijanonanao, mila mijanona manodidina ianao 6-7 andro. Ny sasany amin'ireo manintona izay hitanaoMihevitra ny hahita an'izany Pirates of the Caribbean aho, Peter Pan's Flight ankoatry ny hafa.
6. Toerana fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra 2021: Venise any Italia, Eoropa
Any avaratra atsinanan'i Italia no misy azy, Venise dia fahitana hitan'ny mpandeha. Io no renivohitry ny faritra Veneto ary misy 118 nosy kely nosarahana lakandrano. Ireo nosy ireo dia mifandray mihoatra ny 400 tetezana. Tsy misy lalana, midika hoe tsy misy fifamoivoizana mitabataba. Mandeha sambo ao anaty lakandrano ny olona, fanompoana ny mpitsidika amin'ny fampisehoana mahavariana sasany izay tsy tazana any an-kafa. Venice dia heverina ho iray amin'ireo tanàna tsy manam-paharoa indrindra eto an-tany, mampiditra azy io ho iray amin'ireo toerana itobiana indrindra ho an'ireo mpandeha sy mpaka sary ao 2021. Ary, Venice dia fantatra fa tantaram-pitiavana mampino amin'ny endriny. Venise koa dia mitana ny lisitr'ireo be indrindra tanàna tsara tarehy eto amin'izao tontolo izao. Izy io dia noho ny fanolorana tsy manam-paharoa lalana, tranobe antitra mahavariana, ary singa manan-tantara hita manerana ny fanamboarana azy.
7. Toerana fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra any 2021: Farihin'i Baïkal, Rosia
Ny firenena lehibe indrindra manerantany, Russia dia manana zavatra betsaka hatolotra anisan'izany ny morontsiraka, tendrombohitra, ary tranobe manan-tantara. Na izany aza, Farihin'i Baikal no be mpisaina indrindra ho an'ny mpandeha sy mpaka sary maro. Io dia iray amin'ireo farihy malaza indrindra eto an-tany, miaraka amin'ny tatitra marobe milaza fa mihoatra ny 25 tapitrisa taona. Io koa ilay farihy lalina indrindra eran-tany, mahatratra ny halalin'ny lalina indrindra 1642 metatra. Inona koa? Baikal no farihy rano velona lehibe indrindra eto an-tany. Mihoatra ny 20% ny rano voajanahary manerantany dia monina ao amin'ity farihy ity. Ho an'ny manodidina 5 volana isan-taona, ny farihy mijanona ao ambany rakotra ranomandry matevina. Na izany aza, mbola azo atao ny mahita lalina toy ny 40 metatra ambaniny. Ho an'ny manodidina 10 volana isan-taona, ny rano mijanona ao ambanin'ny mari-pana ivo 5 degre Celcius. Na izany aza, manodidina ny volana aogositra, miakatra ny maripany 16 degre Celsius, manao azy tsara ho an'ny milomano haingana sy milentika.
8. Ny rindrin'ny Great China
Na dia nitombo ho firenena mandroso ara-teknolojia aza i Shina ankehitriny, mbola tsy namoy ny hatsarana sy ny fiangaliana nananany tamin'ny vao nahitana azy. Betsaka ny manintona sy mifono mistery momba an'i Shina, fa ny Great Wall kosa dia manadanja ny isa rehetra sy ny laharana. Araka ny fomba fiteny sinoa malaza, "Tsy misy olona afaka ny ho tena mahery fo raha tsy efa teo amin'ny rindrina lehibe". Manitatra mihoatra ny halavan'ny 6000 kilaometatra, ity tsangambato goavambe ity dia iray amin'ireo karazany, ary tsy maintsy tsidihina isaky ny mpandeha. Manodidina ny manodidina ny haavony 6 ny 8 metatra, na izany aza, mihoatra ny mihoatra ny 16 metatra amin'ny hahavony. Ampahany malalaka izany mihoatra ny 10 ny mpandeha tongotra dia afaka mandeha eo aminy mifanila. Ny manda dia misy manda maro mahavariana, na izany aza, ny tranainy indrindra dia nanomboka tamin'ny taonjato faha-7 tal. Ny Great Wall dia traikefa iray indray mandeha eo amin'ny fiainana iray manontolo izay tsy tokony hadinoina amin'ny vidiny rehetra.
8 Hevitra fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra 2021: Famaranana
Na dia mety nofoanana aza ny fialan-tsasatrao tany 2020 noho ny areti-mandringana, mbola afaka mandray an'io dia io ianao amin'ity taona ity. Na izany aza, alao antoka fa mandray ny dingana rehetra ianao raha te hitahiry izany saran'ny fitaterana. Tokony hitsidika an'i Cape Cod farafaharatsiny ianao, Alaska, ny Grand Canyon, Farihy Crater, ary Disneyworld. Atombohy ny drafitra ny dianao anio mba hankafizanao ny dianao. Tianay ny mandeha lamasinina araka izay azonao atao mba hahafahanao mankafy ny fomba fijery tsara indrindra ihany koa.
eto amin'ny Save A Train, faly izahay manampy anao amin'ny drafitra ny iray amin'ireto 8 Hevitra fitsangatsanganana fitsingerenan'ny andro nahaterahana tsara indrindra 2021 lamasinina.
Te hampiditra ny lahatsoratray bilaogy “8 Toerana fitsangatsanganana tsara indrindra amin'ny 2021” ao amin'ny tranokalanao ve ianao? Azonao atao na ny maka ny sary sy ny soratra, ary hanome antsika-bola miaraka amin'ny rohy ity lahatsoratra bilaogy. Na tsindrio eto: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Fmg%2Fbest-birthday-travel-ideas%2F - (Horonan-taratasy midina kely ny mahita ny Embed Code)
Inside manana ny rohy ho an'ny teny Anglisy fipetrahana pejy, fa isika ihany koa dia manana https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml, ary azonao atao ny manova ny / fr ho / ru na / de sy fiteny maro hafa.
BestDestinations fitsingerenan'ny andro nahaterahana manodidina TravelDestinations TravelDestinations2021 TravellingDuringPandemic